Size: H200 * W310 * D200mm
သော့ခတ်: LCD ကိုအတူအီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်
N.W .: 5.5KG
G.W .: 6.0KG
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ပေးပို့မတိုင်မီ 100% စမ်းသပ်နှင့် QC စစ်ဆေးရေးရှိသည်။
ဆိုးကျိုး Can ငါနမူနာ get?
A: ဟုတ်ကဲ့, နမူနာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့နမူနာအခကြေးငွေမည်, အခါဝယ်ရာအရပျအမိန့်ကြောင့်ငွေပြန်အမ်းမည်။
1.We ထောက်ခံမှု OEM& လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု။
2.Our စက်ရုံအဲဒီ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်ပြီ။
2004 ကတည်းက Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်, အတွင်းတည်ရှိပြီး Foshan Weierxin ကို Safe Co. , Ltd မှထက်ပို 23000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 100 ကျော်န်ထမ်းရှိပါတယ်, 10 နှစ်ကျော် Safe ထုတ်လုပ်အတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းပါပဲ။ Weierxin ကို Safe Safe အိမ် Safe, ရုံး Safe, ဟိုတယ် Safe, winder Safe watch, သံမဏိကက်ဘိနက်, သေနတ် Safe, ဖိုင်များ Safe, ငွေသား box ကို Vault တံခါးကိုနှင့်အခြားမြင့်မားတဲ့ဖန်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန် fireproof ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး။ ကျနော်တို့အီး, ROHS, FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်လွန်ပါတယ်။ ထက်ပိုမို 500,000 ယူနစ်များ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစကေးနှင့်အတူ, ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည်တို့အဖြစ်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုကြသည် Weierxin ကို Safe လူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ဘယ်မှာစိတ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ငြိမ်းချမ်းရေး, အလုပ်နှင့်ကစားပေးသည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုတန်ဖိုးအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကတိပေးသောငါတို့စျေးကွက်များတွင်ယုံကြည်စိတ်ချ, အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုရှိသည်။ Weierxin ကို Safe ပြည်တွင်းစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 1000 ကုန်သည်တွေရှိပါတယ်, ကျော်5သန်းသစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လည်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တင်ပို့နေကြသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ OEM ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ 2004 ကတည်းကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစဉ်ဆက်မပြတ် optimized နှင့်တိုးတက်နှင့်နောက်လိုက်ဖို့သစ္စာစောင့်သိသည်အသုံးပြုသူများနေဆဲရှိပါတယ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကောင်းသော OEM နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုတက် builted ပါပြီ& OMD experience.OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ကြိုဆိုနေကြသည်။ ကျနော်တို့ R ကို၌ကြီးသောအားသာချက်ရှိ&: D, အထူးသဖြင့် fireproof Safe အပေါ်ဖောက်သည် Safe ၏စည်းဝေးပွဲကို။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလုပ်လုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ခံမှုအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် viewd နေကြသည်။